हेर्दाहेर्दै अँखा अगाडि बाढीले यसरी बगायो हेलम्बुको प्रहरीचौकी ! – Media News Khabar
हेर्दाहेर्दै अँखा अगाडि बाढीले यसरी बगायो हेलम्बुको प्रहरीचौकी !
medianewskhabar //काठमाण्डाै – पानी नपर्दा पनि खोलामा बाढी आएपछि अनुसन्धानका लागि आज विज्ञको टोली सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची जाँदै छ। मेलम्चीमा विज्ञ टोली पठाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिले छलफलमा छ ।
Previous Pakistani Ambassador Haider and NPFCA president Rana distributed relief today
Next मेलम्चीबाट फर्किएकि आँचल शर्माले लेखेको यस्तो पोस्टले जित्यो सबैको मन